Maxamed Yaasiin Axmed oo loo doortay duqa Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaxamed Yaasiin Axmed oo loo doortay duqa Gaalkacyo
July 23, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Duqa cusub ee Gaalkacyo Maxamed Yaasiin Axmed “Tumay” .
Garowe-(Puntland Mirror) Golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa u doortay Maxamed Yaasiin Axmed “Tumay” duqa cusub ee magaalada.
Mr. Tumay ayaa ku gaaracay tartamihiisii ugu dhowaa Deeq Maxamuud Xaashi 24 cod intii lagu guda jiray wareega ugu dambeeya cod-bixinta.
Wareega saddexaad ayuu duqa cusub helay 24 cod, halka Deeq Maxamuud Xaashi uu helay 7 cod.
Waxaa doorashada ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali, xubno baarlamaanka ah, wasiiro iyo odayaasha dhaqanka oo iyagu soo xulay xubnaha golaha deegaanka ee wax doortay.
8-dii bishaan Juulay ayaa Madaxweynaha Puntland kala diray golahii deegaanka hore ee Gaalkacyo kadib waxqabad xumo lagu eedeeyay, wuxuuna guddoomiye ku meel gaara ah u magacaabay Maxamed Yaasiin Axmed oo maanta si rasmiya loogu doortay duqa degmada.
Tumay waa nin dhalinyaro ah oo aqoonyahan ah wuxuuna lasoo shaqeeyay xukumadii dowladii ku-meel gaarka ahayd ee Madaxweyne Cabdulaahi Yuusf Axmed wuxuuna kasoo shaqeeyay xafiiska madaxtooyada, kadibna wuxuu xoghaye kasoo noqday safaarada Soomaaliya ee dalka Belgium-ka.
March 25, 2019 Saahid Maxamuud Cali oo loo doortay duqa cusub ee Gaalkacyo